Hadda waxaad ku abuuri kartaa astaantaada gaarka ah ciyaartoyga Google Play Games | Androidsis
Laba sano ka hor waxaan ogaanay in Google uu raadinayo wado kor loogu qaado ciyaarta ka qalab Android ah iyadoo la bilaabay sheeko cusub oo ahayd Google Play Games. Runtu waxay tahay in hadda aan ku jirno daqiiqad weyn oo la xiriirta ciyaaraha fiidiyowga ee 'Android' iyadoo la bilaabayo saamiyada cajiib ah sida Clash Royale, ka Imaatinka Nintendo bisha soo socota iyo himilooyinka 'Blizzard' weyn ee ku soo dhowaanshaha aaladaha mobilada si dhakhso leh goor dambe. Waxaan sidoo kale ilaabi karin Bethesda, taas oo ah Hoyga Dhacdooyinka ayaan la yaabnay qof kasta oo loogu talagalay inay ku soo galaan Android iyo iOS oo leh ciyaar fiidiyoow weyn. Hadda Google ma doonayo inuu lumiyo isbeddelkan waxayna ku dartay horumarin taxane ah oo ku saabsan adeeggaas oo ay rabto inay ku noqoto nooc Steam ah oo adeegsadayaashu awood u leeyihiin inay yeeshaan avatar gaar ah iyo astaanta isticmaalaha.
Taasina waa waxa cusbooneysiinta cusub ee Google Play Games ay ku saabsan tahay, sameyso astaan ​​kuu gaar ah isticmaale si aad ugu adeegsato cinwaannada aad ku dhiirrigeliso avatar-ka caadiga ah ee ka socda barnaamijyada kale iyo ciyaaraha fiidiyowga. Runtu waxay tahay in nuqulkan cusub sifiican loogu baahday, ilaa iyo hada xogta kujirta Cayaaraha Google Play ayaa loo gudbiyay ahaanshaha magacaaga, wax laftiisa laftiisu noqon kara waxoogaa caajis ah markaan haysanno suurtogalnimada abuuritaanka maskaxdeena beddelka adduunyada xiisaha leh. ka buuxaan tacabirro, dagaallo iyo xujooyin noocyo iyo midabbo leh leh. Waxay ku socotaa isla xariiqyadan isla markaana aan ku dhiirrigelinno cayaaraha noocyo badan oo ka mid ah dhammaadka usbuuca oo ka mid ah kuwa ugu fiican xilligan dhammaan noocyada kala duwan.
1 Astaantaada gaarka ah isticmaale
2 Uma baahnid inaad gasho
Astaantaada gaarka ah isticmaale
Maalmaha soo socda waxaan heli doonaa cusbooneysiinta cusub imaatinka boosteejooyinkayaga taasna waxay noo oggolaan doontaa awoodda aan ku abuuri karno muuqaal gaar ah oo aan ku bilaabi karno Ciyaaraha Google Play. Isticmaalayaasha jira ayaa lagu dhiirigelin doonaa inay abuuraan astaan ​​isticmaale marka xigta ee ay galaan ciyaarta fiidiyowga. Google wuxuu ku adkeysanayaa in sidoo kale laga sameyn karo barnaamijka Google Play Games laftiisa, ikhtiyaar aan wali firfircooneyn haddii aad isku daydo.
Astaantaada gaarka ah ama Aqoonsigaaga waxaa loo dejin karaa mid gaar ah ama mid guud, sidii ay ahayd illaa iyo hadda. Waxaa jira 40 avataar asal ah oo la dooran karo si loo abuuro astaan ​​gaar ah ama aqoonsi sida aad ku arki karto GIF-ga firfircoon ee ay wadaagaan Google laftiisa. Sikastaba, Waxaan kugula talinayaa inaad rakibto nooca ugu dambeeya ee Ciyaaraha Google Play (Waxaad haysataa APK dhamaadka qoraalkan), maadaama Google sida caadiga ah ay soo saarto cusbooneysiin wajiyo ah, markaa waxaad nasiib u yeelan kartaa in koontadaadu ka mid tahay, si aad u sameysato aqoonsigaaga oo aad u doorato mid ka mid ah 40kaas avatar.
Uma baahnid inaad gasho
Mid kale oo ka mid ah faa'iidooyinka ugu waaweyn ee la yimaada cusboonaysiintaan cusub, sidaan ku dhawaaqnay waqti aan fogayn, Waa horeba uma baahnid inaad gasho sida ku dhacday dhammaan ciyaarahaas oo ay ahayd inaad doorato koontada Google oo aad aqbasho oggolaansho taxane ah ka hor intaadan awoodin inaad marin u hesho astaamo gaar ah sida badbaadinta daruuraha ama guulaha.
Sidaa darteed, marka aad ku xirto Cayaaraha Cayaaraha koontadaada, mar dambe ma sii mari doontid daaqadda pop-up-ka ee ku weydiisay rukhsadaha qaarkood si aad ugu soo gasho koontadaada Google. Tani iman doonaa anfacaya kuwa horumariya, Maaddaama ay jiri doonaan ciyaartoy badan oo gala Cayaaraha Cayaaraha, taas oo siin doonta iyaga tirakoob wanaagsan iyo, isla mar ahaantaana, dakhli badan, in kasta oo ay sidaas noqon doonto haddii adeegsaduhu uu dhaqaajiyo lacagaha iyadoon loo baahnayn inuu ka xaqiijiyo goobaha.
Tallaabadan Google doonayo inuu kor u qaado Ciyaaraha Cayaaraha si ay u noqoto xudunta ama xarunta aan ka qaniini karno asxaabta markaan ognahay guulahooda ama meesha aan ka ogaan karno kulamada ay qirinayaan. Waxaan sidoo kale arki doonaa warar dheeri ah oo ku saabsan arrintan, maaddaama cayaaraha ku jira aaladda gacanta ee Android ay muhiimad sii kordhayaan.
Soo Degso APK-ka Ciyaaraha Google Play
Ciyaaraha Google Play
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Google ayaa kuu oggolaan doonta inaad ku abuurto astaantaada gaarka ah ciyaartoyga Google Play Games
Alejandro Flores sawirka meeleynta dijo
Maxay ii oggolaan la’dahay inaan mar dambe adeegsado sawirkeyga 'google'? Waxay igu qasbeysaa inaan isticmaalo haa ama haa mid kamida sawirada ay isiiyaan (oo aan necbahay). Waxaan rabaa dhabarkayga dhabta ah
Jawaab Alejandro Flores
Neisy Rodriguez dijo
Si adag ayaan kugula raacsanahay, aad ayaan uga xumahay cusbooneysiintan.
Jawaab Neisy Rodríguez
Waa wax aan wanaagsaneyn in isaga uusan awood u yeelan inuu qaabkiisa u habeeyo qaabkiina cusbooneysiinta horay loo sii qorsheeyay ee aan ikhtiyaar lahayn .. waligood laguma sameynin google. Aad ayaan uga xumahay sawirada cusub ee sawir ee google play. Waxaan rabaa sawirkeyga dib fadlan mahadsanid
waxbarashada corona dijo
Mar dambe kuma dari karo ciyaartoy mana heli karo mid gaar ah waxaan rabaa sawirkeyga oo aan horey u heystay oo aan kudarsan karo ciyaartoy
Ku jawaab eduardo corona
Waa nasiib darro, in aan la dhisi karin sawirka ama avatarka uu qofku doonayo inuu noqdo astaan ​​ahaaneed !!! ...
Muuqaal cusub oo xaday ayaa na hor dhigaya HTC One M10